Sariitatra momba ny lohataona ho an'ny ankizy
Ny ankizy dia manomboka aloha kokoa ny sarimihetsika milalao an-tsehatra . Efa ao anatin'ny 2-3 taona izao ny ankizy tsirairay ary manana ny toetrany mahafinaritra indrindra izy ireo: miezaka miaina amin'ny tontolo manodidina izy ireo, ny tranga voajanahary, mianatra manaiky ny tsara sy ny ratsy, manavaka ny fihetseham-po sy ny fihetseham-po. Ankoatr'izay, ireo sariitatra - ity no tantara tsara indrindra ho an'ny ray aman-dreny sy ny fandinihana manokana ataon'ny ankizy ao anatin'ny dingam-pifankahalalana amin'ny fizaran-taona.
Ohatra, sariitatra momba ny lohataona ho an'ny ankizy, dia ho avy, tena azo atao tsara, amin'ny hariva amin'ny paompy mafana. Ny tantaran'ny lohataona dia milaza ny fofon'aina momba ny fifohazana ny natiora, ny fahazarana amin'ny biby ary ireo mpitondra hafanana voalohany.
Aoka àry isika hampifandray ny raharaham-barotra amin'ny fahafinaretana ary hanangona repertoire "cartoon" lohataona ho an'ny mpikaroka madinika.
Lisitry ny sariitatra momba ny lohataona
Voalohany indrindra, hajanontsika amin'ireo sangan'asa sinema nasionaly, izay tsy nisy taranaka iray nitombo, ary mahaliana ny ankizy hatramin'izao. Mazava ho azy, ity dia:
Iray amin'ireo sariitatra Sovietika tsara indrindra momba ny lohataona mitondra lohateny hoe "Ahoana no nataonay lohataona". Tantara iray momba ny fomba niampangan'ilay zana-boribory kely, natory teo anilan-dreniko, no namoha ny taratra voalohany tamin'ny masoandro ny lohataona. Rehefa nifoha izy, dia gaga tamin'ny zava-nitranga, satria mbola tsy hainy ny lohataona.
Horonan- tsary an-tsary "Spring Tale". Ity anganongano ity: mozika mangina, endri-javatra manan-tsaina ary mazava ho azy, avantatra manoloana ny tantaran'ny lohataona, izay mety ho tsara kokoa ho an'ny mpijery kely.
Feon-tantely mahafinaritra "Roapolo Volana" no tena mpividy ny karazana sariitatra Sovietika momba ny lohataona.
"Dadabe Mazai sy ny bitro" - sarimihetsika lohataona fohy, mifototra amin'ny asan'ny N.A. Nekrasov.
Ho an'ny sariitatra maoderina maoderina, misy andian-dahatsoratra mahaliana momba ny lohataona ao amin'ny andian-tantara malaza ho an'ny ankizy: "Masha and the Bear", "Luntik", "Barboskiny". Lazao ihany koa ny momba ny lohataona Smeshariki sy ny bitro roa mahafinaritra Max sy Ruby.
Avy amin'ny sariitatra avy any ivelany, ny asa "Charlotte Zemlyanichka: Ahoana ny famerenana ny lohataona" dia mendrika ny hisarika ny saina .
Ny ankamaroan'ny zaza mandritra ny fararano
Fanabeazana ny zavakanto
Manao balaonina ho an'ny nahazo diplaoma tao amin'ny kindergarten
Fandinihan-tena ataon'ny ankizy mpianatra
Ny mpanamboatra ny ankizy miaraka amin'ny mikrôfo
Inona no hakana ny zaza eny an-dranomasina?
Kilalao an-tokantrano ho an'ny ankizy
Ahoana no fomba hampianarana ankizy iray ao anatin'ny dimy taona mba hananganana olona iray ao anatin'ny dingana?
Famangiana momba ny fararano ho an'ny zazalahy
Lalao fandraisam-peo amin'ny kilasy jadona
Ahoana ny fomba fihetsika amin'ny fandevenana?
Nahoana no manonofy lehilahy iray ny trondro?
Cystitis amin'ny fitondrana vohoka - Drug safaris ary 4 tsara indrindra
Kate Blankett dia adala amin'ny zazavavy kely iray
Pikantsary amin'ny tananao
Ny rantsan-tànana eo amin'ny sandriny dia manjary manjavozavo
Nahoana no bevohoka ny namanao?
Famantarana ny mpamosavy amin'ny vehivavy iray
Fiompy vehivavy valo ambinifolo - sary 40 modely amin'ny zazavavy ao anaty jirobe
Ahoana ny fanasan-tsakafo?
Fondant miaraka amin'ny kakaô ho an'ny mofomamy
Inona ny fahazotoana?
Ahoana ny fomba hanasana ny tantsambo fotsy?
Borago - zana-kôkôma
Frantsay apple pie
Ahoana no hanaisorana totozy ao an-trano?
Ny alèin'ny alikaola
Ahoana no tokony handraisana ny ranon-tsavony?